4 Uloliwe Iindawo ezinika umdla Pre-Trip Essentials EYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 4 Uloliwe Iindawo ezinika umdla Pre-Trip Essentials EYurophu
Enye yezona zinto zimnandi ohambahambayo eYurophu ukuba ungafumana khona ngololiwe yonke. Yeyona kunayo yonke kwe izithuthi kunye nabantu abaninzi omthandayo bahamba zwekazi. Abantu musa ukubuza imibuzo ngaphambi kokuba isigqibo ukuthatha uloliwe, ezimqoka pre-uhambo ezifana ndithenga phi na amatikiti? Ndiyazijonga njani iishedyuli? Ndinga ukusuka kwelinye ilizwe ukuya kwelinye? Zintoni ii oololiwe ebusuku ezifana?
Nazi ezi zinto pre-uhambo kufuneka uyazi:
Iishedyuli kunye Amaxabiso koololiwe European
Nangona lonke elaseYurophu kunxulumene yi uthungelwano kaloliwe ebanzi kakhulu ilizwe nganye inkampani yayo kaloliwe kunye, ke, website yayo nge iishedyuli kunye namanani. Ukuba ufuna ukuba ahambe ngetreyini ngaphakathi lizwe, ngaphandle kokuwela nawuphi na umda, solo kucetyiswa uye ngqo Gcina Uloliwe njengoko ubuya kwenza ezazihamba ukuze Skyscanner. Ukuba awazi ukuba yintoni na, Google uya kukunika impendulo. Phantse zonke websites sibe nenguqulelo IsiNgesi, ngoko ke kulula ukuyisebenzisa uze uhlole iishedyuli. Ukuba ufuna ukuhamba ngololiwe ukusuka kwelinye ilizwe ukuya kwenye (ndisoloko ndikwimida Europe) kufuneka uphendle indlela i app like Gcina A Isitimela.
Njani kwaye Thenga nini Amatikiti?
Enye essentials pre-uhambo siyafuna amatikiti. Ezinye iindinyana uloliwe (ingakumbi abo isantya esiphezulu nabo ukuqhagamshela iingqukuva okanye imizi emikhulu) iye ithande ukwenyuka ngexabiso xa umhla sokuhamba lisondela; kukho abanye (oololiwe zendawo nabo axhume izixeko ezikufuphi) ukuba uhlale ugcine ixabiso efanayo. Ukuba uhamba ukusuka capital ukuba capital, kungcono ukuba uthenge itikiti kwiiveki ezimbalwa kwangaphambili ukufumana ixabiso best. Ukuba uthenga amatikiti ngokusebenzisa apps (ezininzi Iinkampani Uloliwe European ube app yabo kakhulu), uya kufumana i tikiti elektroniki kunye ikhowudi QR uyakwazi ukubonisa umqhubi ukusuka umkhusane kwifowuni yakho, ngoko akuyomfuneko ukuba kokuziprinta.
London to Lille Uqeqesha
London to Bordeaux Uqeqesha
Indlela yokufika eSitishi ngundoqo kwiiNdlela eziPhambi kohambo
Into emnandi ehamba ngololiwe kukuba izikhululo zidla embindini izixeko kwaye zifikeleleka lula kamasipala, ibhasi okanye ngenyawo. Akuyomfuneko ukuba bahambe ngeyure ukuya ku-moya (ngaphandle kokuba ikwi ngaphandle komzi, nangona ngokubanzi ekubeni ungaze kuthatha ixesha elide kangaka). Ukuba u ukuhamba imithwalo kancinane, ungakwazi ukuya nge izithuthi zikawonke wonke. Ukuba zilayishwe kakhulu, mhlawumbi iteksi yeyona ndlela ilungileyo. Akunyanzelekanga buhlungu ukuba athi: kukho imizi ukuba babe izikhululo zikaloliwe eziliqela (umzekelo, Paris) ngoko kusoloko siqinisekisa ukuba uloliwe wakho isuka. Ngamanye amaxesha oko kungenzeka ukuba kufuneka ukuba bakhutshelwe ukusuka kwisikhululo enye ukuya kwenye.
Ukugcina ye Uqeqesha eYurophu
oololiwe baseYurophu kumka ngomzuzu ngqo (ngaphandle kokuba kukho ukulibaziseka kwabanye isizathu sezulu). Ukufumana kwisikhululo malunga 15-20 imizuzu phambi kusoloko omnye essentials pre-uhambo. Khumbula ukuba kukho oololiwe ukuba elide kakhulu kwaye ngamanye amaxesha kuya kufuneka ahambe umgama omde ngeenyawo ukuya ekupheleni kweqonga. Le zokumisa phakathi isixeko omnye kunye nomnye abadli zihlala ngaphezu kwemizuzu embalwa.
Esi sikhokelo elincinane kodwa aluncedo essentials pre-uhambo for uhambo ngololiwe eYurophu kunye nezinto onazo ukuze ukwazi phambi kokuba isigqibo ukuze uthathe omnye. Siyathemba ukuba amava uzuza iya kuba yebaluleke gqitha.
Faka Gcina-A-Train babhukishe itikiti lakho uloliwe kuyo nayiphi na indawo apha 3 imizuzu, kwi amatikiti etreyini irhafu libiza kancinane kwaye wayekiswa iimali ukubhukisha owakhe!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F4-train-pre-trip-essentials-europe%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
#imithwalo #ebezithunyelwe europeantravel train Travel uhambo ngololiwe